Egwurugwu Jell-O Ista - Ezumike
buffalo ọkụkọ pasta salad na kichin
nkezi okpomọkụ nke crockpot na ala
ole mgbe ka m ga-ata ahihia skwọsh
Akwa Jell-O Ista
Girlsmụ m hụrụ akwa ndị a n'anya! Ọ bụ ezie na akwa ahụ na-ewe obere oge, ha mara mma ma dịkwa mfe ịme!
Gbanyụọ akwa Jell-O Ista
Mgbe m hụrụ ndị mara mma Akwa Ista site na Họrọ Na-eme nke ọma Amaara m na m ga-anwale ha! Enweghị m ihe ndị na-ebu akwa ka m nwee ike iji ụlọ ahịa dollar akwa plastik ime ihe ndị a ma ọ rụọ ọrụ zuru oke!
Eji m akwa plastik si n'ụlọ ahịa dollar na a sirinji plastic iji nweta Jell-O n'ime akwa (ị nwekwara ike inweta ha na ahịa ọgwụ, nke m na-eji bụ maka ịlele ọgwụ).
Ndụmọdụ maka akwa Jello Ista zuru oke
Lee ụfọdụ ndụmọdụ maka ime ka ihe ndị a bụrụ ihe ọma:
Ejila mma tinye oghere n'ime akwa plastik gị… (mma nwere ike ịfefe site na plastik na-atụghị anya ya… tụkwasị m obi na nke a!)
Mmanụ dị n'ime àkwá ahụ nke ọma ka ha wee pụta ngwa ngwa
Ebe akwa kpodoro isi ala ma jupụta ya na nnukwu njedebe. Ọ bụrụ na ị nwere ikuku ikuku ha ga-anọ na ala akwa gị mgbe ị mechara.
Can nwere ike ịgwakọta ihe niile gị Jell-O na esi mmiri na mbido ma ọ bụrụ na ị họrọ. Etinyela yogọt ruo mgbe ị ga-akwadebe ịwụsa oyi akwa ahụ, ọ na-agba ọsọ ngwa ngwa.
Gbaa akwa ahụ n'okpuru mmiri ọkụ maka sekọnd ole na ole tupu iwepụ ha na ebu
Mee di na nwunye karia ka ị na-eme atụmatụ na ị chọrọ, otu di na nwunye nwere ike ịkewa mgbe ị na-achịkwa 'ịmeghe'
Eji m àkwá plastik si n'ụlọ ahịa dollar. My àkwá nwere obere oghere na onye ọ bụla na njedebe… iji nweta Jell-O n'ime àkwá, m ga-eme ka oghere buru ibu n'otu akụkụ otú ahụ ka m dị nnọọ gbagọrọ abụọ nke mkpa n'ime oghere na-eme ka ọ a bit ibu. Ejila mma mee nke a… Ana m ekwu site na ahụmịhe.
Tinye ya ebe a
Achọ ọzọ yummy Ista emeso? Jide n'aka na ị ga-akwụsị ma chọpụta ọmarịcha mma m Bunny Butt Cupcakes !
4,25site na4votu NyochaNtụziaka
Nkea akwa akwa Jell-O Ista
Oge Nkwadebe30 Nkeji Oge nri4 awa Oge zuru ezu4 awa 30 Nkeji Ọrụ10 akwa Onye edemedeHolly NilssonMgbe m hụrụ akwa ọmarịcha Ista ndị a họrọ si na-eme nke ọma, amaara m na m ga-anwale ha! Enweghị m akwa ebu ahụ ka m wee nwee ike iji akwa ụlọ ahịa dollar na-eme ka ndị a wee rụọ ọrụ zuru oke! Bipute Ntụtụ
▢abụọ teaspoons mmanụ
▢4 igbe Jell-O na 4 agba dị iche iche 3 ounces ọ bụla
▢4 tablespoons yogọt grik
▢10 akwa plastik ma obu akwa ebu
▢efu styrofoam akwa tree
N’otu akụkụ àkwá ahụ, hụ na e nwere oghere buru ibu iji jupụta akwa ahụ. (Nwere ike iji mkpịsị aka mee ya ka ọ buo ibu, ntu ma ọ bụ malite ịgba)
Ihe dị mkpa: Mmanụ n'ime akwa ọ bụla nke ọma site na itinye akwa nhicha akwụkwọ n'ime mmanụ ahụ wee hụ na ekpuchi ya dum.
Ọ bụrụ na akwa plastik gị nwere oghere na nsọtụ abụọ ahụ, tinye obere ngaji (ihe dị ka ngaji 1) na ala nke traị akwa styrofoam ma tinye akwa plastik gị na tray ahụ (jello ga-anọ na mpụga akwa ahụ). Friji ihe dị ka nkeji 5-10 ma ọ bụ ruo mgbe edozi. (Nzọụkwụ a ga-egbochi oghere ka Jell-O ghara ịpụ).
Ikpokọta 1 igbe nke Jell-O na ½ iko esi mmiri. Ebido ruo mgbe ọma etisasịwo.
Iji sirinji rọba, jupụta akwa ọ bụla ⅛ jupụtara na agba mbụ gị. Ikwesiri idi n'okpuru ½ cup jello fọdụrụ ozugbo ịmechara usoro a. Refrige akwa nsen dị ka ihe dị ka minit 10-15.
Tinye yogọt tablespoon grik 1 na Jell-O fọdụrụ ma kpalie nke ọma. Tinye akwa a n’elu akwa mbụ nke Jell-O.
Tinyegharịa agba ndị fọdụrụ nke Jell-O na-enye ya ohere ịtọ n'etiti akwa ọ bụla. Ekwe ka ịtọ awa 4 ma ọ bụ n'abali.
Iji kpughee Jell-O, gbaa akwa ọ bụla n’okpuru mmiri pọmpụ ihe dị ka sekọnd 3-4. Jiri nwayọ pịkọta akwa ahụ ma ị ga - ahụ Jell-O ka a hapụ ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị, jiri nwayọọ gbanye ya n'okpuru mmiri ọzọ maka obere sekọnd ole na ole.
IsiokwuAkwa Jell-O Ista N'ezieNri Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
More Ista echiche ebe a